Gbasara Anyị | Wenzhou Hawai Electron & Electric Manufacture Co., Ltd.
Wenzhou Hawai Electron & Electric Manufacture Co., Ltd. nke a makwaara dị ka YUANKY malitere na 1989. YUANKY nwere karịa ndị ọrụ 1000, na-ekpuchi mpaghara nke ihe karịrị 65000 square mita. Anyị nwere oge a mmepụta edoghi na elu na-achịkwa na ngwá na nkà mmụta sayensị ochichi, ọkachamara injinia, elu zụọ technicians na nkà ndị ọrụ. YUANKY na-ejikọ R & D, mmepụta, ahịa, na ọrụ iji mepụta azịza kọmputa na eletriki zuru ezu.
YUANKY ka ISO9001: 2008 na ISO14000 TUV Quality Management System kwadoro ya. Anyị na-enye ụdị asambodo nnwale niile, dị ka asambodo Ngwaahịa, nyocha nyocha ụlọ ọrụ, nyocha nyocha nyocha nke nnukwu eletrik, akụkọ nyocha nke atọ, ikike ịgba akwụkwọ wdg.
YUANKY tumadi na-arụpụta circuit emebi, fuuz, contactor & ọsọ agba anọ, anya & mgba ọkụ, nkesa igbe, anya njide wdg Ndị anyị na ngwaahịa izute mba ụkpụrụ na ụlọ ọrụ ụkpụrụ. Anyị enwetala asambodo maka ngwaahịa ire ere anyị, dị ka CB, SAA, CE, SEMKO, UL asambodo wdg Anyị nwere otu setịpụ nke ndị nnwale na ngwaahịa anyị niile ga-anwale tupu ịhapụ ụlọ ọrụ anyị. YUANKY eresịwo ihe karịrị mba 100 ngwaahịa gburugburu ụwa ma jiri nke nta nke nta na-enwe aha ọma na mma na ntụkwasị obi.
Narị afọ nke 21 bụ oge jupụtara na nsogbu na ohere, Anyị YUANKY ndị mmadụ ga-anọgide na-emezi onwe anyị na ị gafere onwe anyị iji zute asọmpi ahụ dị egwu na obi ike na ịrụsi ọrụ ike anyị niile. YUANKY ndị mmadụ na-edebe echiche nke "ịkwụwa aka ọtọ dị ka isi obodo, mma maka nlanarị, ihe ọhụrụ maka mmepe". Anyị na-esi ọnwụ na nke mbụ na klas ngwaahịa mma na mbụ na klas mgbe-sales ọrụ ịzụlite ọnụ na mba ụlọ ọrụ. Ọnọdụ akụ na ụba bụ lanarị nke ndị kachasị ike, ọ dị ka ịkwọ ụgbọ mmiri na mmiri, ọ bụghị ịga n'ihu bụ ịla azụ. YUANKY ndị mmadụ ji ezi obi na-atụ anya ịkwado ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ nwere àgwà a pụrụ ịdabere na ya, ọnụahịa asọmpi na ọrụ kacha elu
Ka anyị lelee ọdịnihu anya! Ka anyị rụkọta ọrụ ọnụ ma wulite mmekọrịta azụmahịa ịhe mmeri! Anyị na-achọsi ike ka gị na gị nwee ọdịnihu dị mma!